जनताले श्री ५ महाराजलाई त फाले, अब श्री ७ लाई पनि फाल्छन् : डा. केसी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
जनताले श्री ५ महाराजलाई त फाले, अब श्री ७ लाई पनि फाल्छन् : डा. केसी
पुस २५, २०७७ तस्बिर : केशव थापा
काठमाडौँ — चिकित्सक तथा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली 'श्री ७' महाराजको जस्तो भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा माइतीघरमा शनिबार आयोजित विरोधसभामा डा. केसीले राजालाई फाल्ने जनताले ओलीलाई पनि फाल्ने बताए ।
'ओलीको व्यवहार श्री ७ महाराजको जस्तो भएको छ । जनताले श्री ५ महाराजलाई त फाले अब श्री ७ महाराजलाई पनि फाल्छन्,' डा. केसीले थपे, 'सत्ताको उन्मादमा रहेको ओली सरकारलाई दण्डित गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु जनताको कर्तव्य हो ।'
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री कोही पनि नभई संविधान सर्वोपरी भएकाले त्यसको पालना नभए जनता सडकमा आउनुपर्ने डा. केसीको भनाइ थियो । जनताको संघर्षबाट ल्याएको संविधानको रक्षा गर्नु मतदाताको कर्तव्य भएको उनले बताए ।
संसद् विघटनविरुद्ध जनताले ठाउँठाउँमा विरोध गरिरहेको डा. केसीको भनाइ थियो ।
संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको र त्यहाँबाट ओलीको कदमलाई रोक्ने आश रहेको डा. केसीले बताए । 'अदालतले संविधानको रक्षा गर्छ भन्ने आस गरेका छौं,' उनले भने । संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध न्यायालयले फैसला नदिने हो भने ओलीको कदम विरुद्ध आएका जनता सर्वोच्च विरुद्ध लाग्ने खतरा हुने र न्यायालयमाथिको विश्वासमा कमी आउने केसीको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताए । उनले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरू पनि विघटन गर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले वैशाखमा निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा नगरिएको बताए ।
प्रदर्शन गर्न माइतीघर गएकाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले केहीबेर अवरोध गरेका थिए ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७७ १३:३९
अस्ट्रेलिया १ सय ९७ रनले अगाडि
पुस २५, २०७७ एजेन्सी
सिड्नी — अस्ट्रेलिया भारतविरुद्धको तेस्रो टेस्टको तेस्रो दिन शनिबार बलियो स्थितिमा पुगेको छ । अस्ट्रेलियाली टिम १ सय ९७ रनले अगाडि छ । दिनको खेल समाप्त हुँदा घरेलु टिमले आफ्नो दोस्रो इनिङ्स दुई विकेट गुमाएर १ सय ३ रन बनाएको छ ।
उसका लागि मार्नस लबुसचेन ४७ र स्टिभ स्मिथ २९ रन बनाएर खेलिरहेका छन् । उनीहरूले ६८ रनको साझेदारी गरिसकेका छन् । यसअघि भारत आफ्नो पहिलो इनिङ्समा २ सय ४४ रन बनाएर अलआउट भएको थियो ।
त्यसमा अघिल्लो दिन नटआउट रहेका चेतेश्वर पुजाराले ५० रन बनाए भने ऋषभ पन्तले ३६ रन जोडे । उनीहरू आउट भएपछि भारतले लगातार विकेट गुमाएको थियो । रवीन्द्र जडेजा २८ रन बनाएर नटआउट रहे ।
प्याट कमिन्स सबैभन्दा सफल बलर रहे र उनले चार विकेट लिएका छन् । टेस्टमा अब दुई दिन बाँकी छ र अस्ट्रेलियाले जितका लागि आधार तयार पार्ने प्रयास गर्नेछ । चार टेस्टको सिरिज १–१ को रोमाञ्चक बराबरीमा छ ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७७ १३:३२